Ahmiyaddii socdaalkii Wasiirka Madaxtooyaddu ku tagay Ingiriiska | Somaliland.Org
Ahmiyaddii socdaalkii Wasiirka Madaxtooyaddu ku tagay Ingiriiska
November 12, 2012	Wasiirka Madaxtooyadda Somaliland Md. Xirsi Cali Xaaji Xasan, ayaa maalintii Jimcihii ka soo laabtay socdaal muddo todoba maalmood ah oo uu ku tagay dalka Ingiriiska.
Socdaalkaasi oo markii hore ahaa mid shakhsi ah oo uu ku soo qaadanayay fasax gaaban oo uu ku tagay dalkaasi, waxa uu ku muujiyay kartidiisa shakhsiga ah. Ka dib markii uu markii u horeysay dhiiri-gelin niyadeed iyo mooraal dhis u sameeyay saaxiibadda Somaliland. Wasiirku waxa uu bilad sharaf ku maamuusay mid ka mid ah Xildhibaanadda Baarlamaanka Ingiriiska ee u ban-baxay taageeradda qadiyadda Somaliland.Talaabadani waxay ahay mid yar hase yeeshee sii xoojin karta in saaxiibadda Somaliland ku leedhay Baarlamaanka Ingiriisku ku xaqiiqsanayaan in Somaliland ay tahay qaran laabta ku haysta qof kasta oo si uun maalin uun wax u taray.
Marka taas laga yimaado Waxa Wasiirka Madaxtooyaddu uu kulamo la yeeshay Jaaliyadda Somaliland ee wadanka Ingiriiska, waxaanu sii takiidiyay xidhiidhka iyo cilaaqaadka ka dhaxeeya xukuumadda iyo qurbo-jooga oo ay suurto gal tahay inuu caajis galay.
Xirsi Cali Xaaji Xasan waxa kale oo uu socdaalkiisii awooda saaray inuu Taageereyaasha xisbiga tallada haya ee KULMIYE ku adkeeyo inay ka qeyb qaataan kharashaadka Xisbiga lagu wadayo xiligan oo lagu jiro ololihii doorashadii labaad ee dawladaha Hoose oo dalka ka dhacaysa 28-ka Bishan November 2012-ka.
Wasiirku waxa uu noqday Wasiirkii u horreeyay ee dhaqaale u soo hooya xisbigiisa, waxaanu kulamo uu la yeeshay qurbo-jooga London iyo Bristol ay xisbiga KULMIYE u ururiyeen dhaqaale lagu qadaray 100 kun oo Dollar.
“Waxaan si gaar ah uga qayb- galay oo waajib igu ah maadaama wakhti olale la joogo in xisbigayga uga ololeeyo Ingiriiska taageerayaashiisa, maadaama xaalada lagu jiraa tahay xilligii doorashada.”ayuu yidhi Md. Xirsi Cali Xaaji Xasan.
Wuxuu intaasi ku ladhay “Waxaan ku guulaysanay in si laxaadle ugu soo baxaan ugu diyaar garoobaan isugu diyaariyaan taageeradda KULMIYE. Waxaanay taageereyaashu ku balan qaadeen boqol kun oo dolar oo ay labada gobol ee London iyo Bristol iska ururiyeen.”
Inta la xasuusan yahay waa Wasiirkii koowaad ee labadii sano iyo dheeraadkii xukuumaddani jirtay qurbaha dhaqaale uga soo hooya xisbiga KULMIYE. Taasi oo rayul caamku ku sifeeyeen mid ka turjumaysa daacadnimadiisa xisbiga KULMIYE, iyadoo inta badan masuuliyiinta xukuumadda ee dalka dibadiisa u baxaa ay iyagu si shakhsi ah uga soo danaystaan.
Previous Post“U Malayn Maayo inaad xukuumadda Hawaysanayso ee waxa wanaagsan inaad Ragga aad la tartamayso run kula kaambayn gasho”Next PostAgaasime loo magacaabay TV-ga Qaranka ee Yurub	Blog